Tontolon’ny bilaogy Kiswahili : nandefasana mampianatra fiteny kiswahili tany Libya sy RDC · Global Voices teny Malagasy
Tontolon'ny bilaogy Kiswahili : nandefasana mampianatra fiteny kiswahili tany Libya sy RDC
Voadika ny 08 Jona 2019 3:22 GMT
Mwandani manoratra momba ny manjo ireo Afrikana mpifindra monina any Andrefana (amin'ny teny Anglisy sy Kiswahili).
Navoakan'i Ethan Zuckerman tamin'ny alalan'ny mpanangom-baovao BlogAfrica ny lahatsorany.
Bilaogera an-tsary malaza ao Tanzania, Issa Michuzi, nahita “World Trade Center” ao Marangu, Moshi, Tanzania. Namoaka sary misy ireo Tanzaniana monina any ivelany any Dar Es Salaam misotro ny ranom-boankazo voanio tanora, zava-pisotro malaza manamorona ny morontsirak'i Afrika Atsinanana izy.
Nanjaka tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiswahili ny vaovao sy ny fifanakalozan-kevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera tany Tanzania, izay natao tamin'ny volana lasa teo. Namoaka ny anaran'ny kabinetra vaovao (amin'ny teny Kiswahili) i Miruko sy Kasri la Mwanazuo, Kaka Pori nandefa ny kabary voalohan'ny filoha vaovao tao amin'ny Parlemanta raha manadihady izany kosa i Fikra Thabiti. Nilaza i Fikra Thabiti fa Jakaya Kikwete no filoha Tanzaniana voalohany niaiky fa miharatsy hatrany ny toe-draharaha politika ao Zanzibar ary mila vahàna. Nampanantena i Kikwete, tamin'ny kabariny fa hampiroborobo ny teny Kiswahili manerana izao tontolo izao. Ho fanombohana dia nandefa mpampianatra Kiswahili any Libya sy Congo RDC izy. Tsy tian'i Harakati ireo mpifidy hanadino ny fampanantenana natao nandritra ny fampielezan-kevitra. Navoakany avy eo ny manifesto fifidianana avy amin'ny Chama Cha Mapinduzi, eo amin'ny fitondrana.
Da Mija manoratra momba an'i Anna Senkoro, ilay vehivavy tokana mirotsaka hofidiana filoham-pirenena amin'ny fifidianana ankapobeny 2006 ao Tanzania. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana tao amin'ny Antoko liam-pandrosoana an'i Tanzania-Maendeleo i Anna Senkoro. Nahazo 0,17% tamin'ny fifidianana izy. Ny kandidan'ny fitondrana Chama Cha Mapinduzi, Jakaya Kikwete, no nandresy tamin'ny isa 80% tamin'ny vato. Na izany aza, mbola miarahaba an'i Senkoro noho ny fanehoana ohatra amin'ny vehivavy hafa i Da Mija.
Msangi Mdogo namoaka ny sarin'ilay mpikambana ao amin'ny Antenimiera Janet Kahama, natory nandritra ny fivoriana voalohany tao amin'ny parlemanta vaovao.
Bilaogera Tanzaniana vitsivitsy no nifanatri-tava. Vao haingana, nihaona tao Toronto ireo bilaogera Kiswahili roa, Boniphace Makene sy Jeff Msangi monina any Etazonia sy Kanada. Ary naka ity sary ity izy ireo.